दुब्लो देखिए किम जोङ उन, अनुहार पनि फेरियो : नयाँ तस्बिर देखेर सबै च’कित ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारदुब्लो देखिए किम जोङ उन, अनुहार पनि फेरियो : नयाँ तस्बिर देखेर सबै च’कित !
दुब्लो देखिए किम जोङ उन, अनुहार पनि फेरियो : नयाँ तस्बिर देखेर सबै च’कित !
काठमाडौं : उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उन अचम्मका नियम र ती लागू गराउनका लागि परिचित छन्। किम जोङ उनले केही दिन अघि ११ दिनका लागि मानिसलाई हाँ’स्न, रुन, सपिङ गर्न र र’क्सी पिउन प्रतिब’न्ध लगाएका थिए । उनका पिता किम जोङ इलको १० औं पुण्य तिथिका कारण यस्तो प्रतिब’न्ध लगाएका थिए ।
हालै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन आफ्नो पार्टी कार्यक्रममा देखिए । यसमा उनी निकै पातलो देखिए र उनको तौल निकै घटेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । उत्तर कोरियाको कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सीले यो फोटो २८ डिसेम्बर, २०२१ मा जारी गरिएको हो । जसमा किम जोङ उन रुलिङ वर्कर्स पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी मिटिङका बेला निकै पातलो देखिएका छन् । यो फोटोमा उनी दुब्लो त देखिएका छन् नै उनको अनुहार पनि फेरिएको छ ।
उत्तर कोरियाका सरकारी अधिकारीका अनुसार किम जोङ उन देशमा खानाको कमीका कारण कम खाइरहेका छन् । किमले स्थिति सामान्य नभएसम्म नागरिकलाई कम खान अपिलसमेत गरेका थिए। अधिकारीका अनुसार किम पूर्ण रुपमा स्वस्थ छन् । उनी धेरै समयसम्म सार्वजनिक नभएपछि उनीबारे विभिन्न अड्कलबाजी गरिएका थिए । तर जब उनी पार्टी छलफलमा देखिन थाले तब सबै दाबी गलत साबित भएका थिए ।
भो’कमरीसँग जुधिरहेको छ उत्तर कोरियाः उत्तर कोरियाको प्याङ्याङमा जुन बैठक आयोजना भयो त्यसबारे भनिएको छ, ‘यो बैठक सन् २०२१ का लागि मुख्य पार्टी र राज्यका नीतिको कामको समिक्षा गर्नका लागि राखिएको हो ।’ अक्टो बरमा किमले भनेका थिए, ‘जबसम्म देश सन् २०२५ मा चीनसँग आफ्नो सीमा पुनः खोल्दैन् तबसम्म मेरा जनताले कम खाना खानुपर्छ । ’ संयुक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि संगठनकोे अनुसार यस वर्ष उत्तर कोरियामा लगभग ८,६०,००० टन खानाको कमी छ ।